RSS ka Email Ngwọta maka WordPress
Email akpaaka na WordPress na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi m
Mọnde, Jenụwarị 10, 2011 Fraịde, Machị 1, 2013 Douglas Karr
Mgbasa Ozi M na onye ọrụ ibe, Bill Dawson, guzobere ọhụrụ anyị kwa izu nke ahụ ka malitere ịbanye taa. (Ọ bụrụ na ị denyeghị aha, ị na-atụfu ihe karịrị $ 12,000 na onyinye… ma na-eto eto!).
Iji mee ka ọ dịkwuo mfe, Luke Newton nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi m, melite ndebiri n'ime usoro nke na-ejide HTML n'ebe ọ bụla na weebụ - ma ọ bụ site na ndepụta ma ọ bụ ibe HTML dị ike. A na-akpọ nke a snippet na sistemụ ya yana ọ nwere ike izo aka na ọdịnaya echekwara, nwee ọdịnaya dị ike, ma ọ bụ si na RSS ma ọ bụ site na ibe weebụ:
Nzọụkwụ ọzọ bụ naanị ịkọwa snippet n'ime HTML nke template email site na iji eriri ngbanwe:
Bill wee dozie otu ụdị n'ime WordPress akpọrọ Akwụkwọ Akụkọ a na-egosipụta ya naanị na ihu akwụkwọ dị n'ime zoro ezo ma ewepụ ya na posts ọ bụla na blog. Na WordPress, a na-eme ya site na ịgbakwunye ụfọdụ ajụjụ ajụjụ dị n'elu akaghị:
query_posts ($ query_string. '& pusi = -4835');
Anyị na-emelite ndepụta iji wepu ihe ọ bụla, nke ahụ mezuru na querystring:
Gịnị kpatara nke a ji dị ukwuu? Kwa izu, M na-ede blọgụ blọgụ na ngalaba Akwụkwọ Akụkọ wee mezuo mkpọsa ahụ iziga. Usoro a na-ewepu ọdịnaya ahụ na peeji nke omenala (yana ndepụta Twitter m) na-akpaghị aka wee zigara email ahụ. Ọ bụghị naanị na nke a bụ na m ga-echegbu onwe m banyere ịde ọdịnaya n'ime WordPress… M ga-enwe otu akwụkwọ ozi m niile ezitere!
Luk na-enye ikikere 2 kwa afọ (ya na ihe ruru 500 email zitere) yana nkwado - yabụ banye na maka Akwụkwọ Akụkọ Teknụzụ Azụmaahịa maka ohere iji merie!
Tags: akwụkwọ akụkọ blogblog ka emailemail Marketing
Jenụwarị 10, 2011 na 10:41 PM
Daalụ maka post Doug! Obi dị anyị ezigbo ụtọ banyere akwụkwọ ozi ọhụụ ọhụrụ ahụ, obi dịkwa anyị ụtọ na anyị so na ya!
Anyị achọpụtala na nke a bụ ụzọ dị mma maka ndị ọrụ WordPress dị arọ iji gaa n'ihu na-eji engine kachasị amasị ha maka ịmepụta ọdịnaya ma debe ya niile n'otu ebe.
Ezigbo ike dị na ikike iweta ụdị ọkwa akpaaka dị na WordPress ka email. Naanị dọpụta ọdịnaya ma gbakwunye na iziga oge a na-ezubere maka usoro email na-akpaghị aka na obere ndozi na-aga n'ihu. Enweghị oyiri na mado - dị na-ewu ya otu ugboro na akpaghị aka!
Na ọdịnaya niile dị na WordPress - ọ dị mfe iji kesaa ọdịnaya ahụ na mpụga email.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ WordPress - ọ bụ ihe ezi uche dị na ịme ya n'ụzọ a!
Ọzọkwa - anyị ga-achọ ịmasị onye ọ bụla sonyere asọmpi ahụ - anyị nwere oke ọ toụ ịbụ akụkụ nke ememme post 2,500th!